WARBIXIN: Xarunta CIES Football Observatory Oo Soo Saartay 100-ka Xidig Ee Xili Ciyaareedkan Shanta Horyaal Ee Yurub Ugu Waa Wayn Ugu Bandhiga Fiicnaa. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Xarunta CIES Football Observatory Oo Soo Saartay 100-ka Xidig Ee Xili Ciyaareedkan Shanta Horyaal Ee Yurub Ugu Waa Wayn Ugu Bandhiga Fiicnaa.
Xarunta cilmi baadhista caalamiga ah ee CIES Football Observatory oo looga bartay qiimayn iyo xog muhiim ah oo ay si joogto ah uga soo saarto kubbada cagta ayaa soo saartay 100 ka ciyaartoy ee xili ciyaareedkan dhamaadka ah ee 2017/18 ugu bandhiga fiicnaa shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn.
Qiimaynta xili ciyaareedkan ee xarunta CIES Football Observatory ayaa ah qiimayntii 227 aad ee ay soo saartay waxaana qiimayntan lagu saleeyay ciyaartoyda 1,800 daqiiqo ka ciyaaray horyaalada shanta ah ee Yurub ugu waa wayn inkasta oo horyaalka Germany lagu saleeyay 1,440 oo daqiiqo ciyaartoydii saftay maadaama oo kulamo 38 ka yar la ciyaaro xili ciyaareedkii.
Sida qiimaynta xarunta caalamiga ah ee CIES Football Observatory lagu shaaciyay Lionel Messi ayaa noqay xidiga xili ciyaareedkan ugu bandhiga fiicnaa dhamaan shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn isaga oo helay qiimayn 92.12 ah laakiin 10 ciyaartoy ee qiimaynta ugu sareeya 6 ka mid ahi waxay ka soo jeedaan kooxda koobka Premier league rekoodhka layaabka leh ku soo qaaday ee Manchester City.
Laakiin marka laga yimaado in Lionel Messi uu qiimayntan hogaaminayo waxaa kaalinta labaad ku guulaystay kubbad sameeyaha xulka qaranka Spain iyo kooxda Manchester City ee David Silva oo saamayn xoogan ku lahaa Sky Blues waxaana ku sii xiga Paulo Dybala oo Juventus ka tirsan.
Robert Lewandowski oo kaalinta 10 aad qiimaynta CIES Football Observatory kaga soo baxay ayaa hogaaminaya horyaalka Germanay halka Edinson Cavani oo kaalinta 21 aad qiimaynta xarunta CIES Football Observatory guud ahaan kaga jiraa uu horyaalka France ugu sareeyo.
Dhinaca goolhayayaasha waxaa kaalinta kowaad ku jira Marc-André ter Stegen oo Barcelona ka tirsan halka difaacyada uu hogaaminayo Nicolas Otamendi oo Manchester City ka tirsan. Dhinaca khadka dhexe David Silva ayaa calanka u sida halka weerarka iyo guud ahaan qiimayntan uu Messi hogaaminayo.
Mohamed Salah oo xili ciyaareedkan abaal marinihii ugu muhiimsanaa ee Premier league soo urursaday ayaa bandhiga guud ee qiimaynta CIES Football Observatory ka galay kaalinta 6 aad halka Cristiano Ronaldo uu kaalinta 17 aad qiimayntan kaga jiro. De Bruyne ayaa kaalinta 8 aad ku jira waxaana ka sare maray Fernandinho oo xogta xili ciyaareedkan si layaableh ugu garaacay xidigo badan.
Guud ahaan qiimaynta 100 ciyaartoy ee CIES Football Observatory ay soo saartay waxaa tirada ugu badan ku leh horyaalka Premier League waxaana kooxaha ingiriiska boqolka xidig ee ugu bandhiga fiican xili ciyaareedkan ku matalaya 30 ciyaartoy halka kooxda Bayern Munich ay tahay kooxda tirada ugu badan ku leh iyada oo ah kooxda kaliya ee 11 ciyaartoy ka heshay qiimaynta boqolka ciyaartoy ee xili ciyaareedkan Yurub ugu bandhiga fiicnaa.
Dhinaca kale, 26 kooxood oo kala duwan ayaa ugu yaraan min hal ciyaaroty ka helay qiimaynta xarunta CIES Football Observatory ee 100 ka xidig ee xili ciyaareedkan ugu bandhiga fiicnaa iyada oo da’yarka qiimayntan sida layaabka leh ugu soo baxay ay ka mid yihiin Kylian Mbappé, Houssem Aouar, Malcom Filipe, Tanguy Ndombélé, Davinson Sánchez iyo Leroy Sané.
Haddaba akhriste waxaa la soo gaadhay xiligii aad si buuxda uga bogan lahayd liiska 100 ka ciyaartoy ee xili ciyaareedkan dhamaadka ah ugu fiicnaa shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn ee qiimaynta CIES Football Observatory.
Akhriste haddii xogta iyo qaabka ay xarunta CIES Football Observatory ay xogtan u soo saartay aad luuqaada Ingiriisida ugu baahan tahay halkan riix: Best Players of the Big-5 League Season